Concert Solidaire : Mashmanjaka & Hazavagna Band à la place de Misié Sayda - ewa.mg
News - Concert Solidaire : Mashmanjaka & Hazavagna Band à la place de Misié Sayda
L’article Concert Solidaire : Mashmanjaka & Hazavagna Band à la place de Misié Sayda a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nivoaka tamin'ny : 12/09/2021
Rakikira vaovao: namoaka ny “Gasikara” i Fara Gloum
10 taona izay ny nitondrany ny anarana Fara Gloum. Izao kosa vao namoaka rakikira azy manokana ity mpanakanto anisan’ireo andriambavilanitra miaina sy mivoy ny mozika malagasy ity. Ela ny niketrehana! Fantara izao fa tontosa soa aman-tsara ilay rakikira manokana, an’i Fara Gloum. “Gasikara” ny lohateniny, maneho avy hatrany ny fironana mozikan’ity mpanakanto ity. Misy hira valo ao anatiny ka hira noforonin’i Fara Gloum ny dimy amin’ireo. Sanganasana mpanakanto hafa kosa ny telo ka an’ingahibe Tselonina ny roa amin’izany. Anisan’ny voarakitra ao ny “Bitsibitsihiko”, hiram-pitiavana miavaka sy nahafantarana voalohany an’i Fara Gloum ihany koa. “Niniako nampidirina anaty rakikira ireo hiran’ingahibe Tselonina, noho ny fiaraha-miasa akaiky misy eo aminay. Izy rahateo no nametraka ilay anarana hoe Gloum, ny taona 2009. 10 taona izay ny nitondrako io anarana Fara Gloum io ka anisan’ny hanamarihako izany ity rakikira ity”, hoy ny fanazavana nomen’ity mpanakanto ity. Efa ela tokoa ny niandry ny vokatra ireo mpankafy, indrindra ireo mpanaraka an’i Fara Gloum amin’ireny andiana “cabaret” fanaony ireny. Mahalala tsara ny endriky ny mozika voarakitra ao anatin’ny rakikira ireo mpankafy ireo, izay nentin’i Fara nilomano tao anatin’ny folk, ny bagasy ary ny world music ihany koa. Ho tohin’ny fampahafantarana ny “Gasikara”, hisy ny “cabaret” izay hotontosain’i Fara Gloum anio, manomboka amin’ny 9 ora alina, eny amin’ny Telozoro Andrefan’Ambohijanahary. Hanaraka azy eo amin’ny fitendrena ry Mbola Talenta, i Johnny Bass, i Fanilo Poppin’s ary i Litsakely. Ho vahininy manokana, hampiaraka talenta amin’i Fara Gloum, kosa i Rossana. Zo ny AinaL’article Rakikira vaovao: namoaka ny “Gasikara” i Fara Gloum a été récupéré chez Newsmada.
Nitohy, omaly alahady teny amin’ny kianja Carion Manjakandriana, ny andro fahefatra amin’ny fifanintsanana, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra vehivavy “division elite”. Mbola mitarika hatrany aloha, hatreto, ny AC Sab-Nam Analamanga. Nanamafy izay toerana nisy azy izay izy ireo, tamin’ny nandreseny ny Asot Analamanga, tamin’ny isa 2 no ho 0. Baolina tafiditr’i Sitraka, teo amin’ny minitra faha-38, sy ny an’i Kanto, teo amin’ny minitra faha-56. Voahosotra ho mpilalao mendrika i Prisca, mpilalaon’ny Sab-Nam.Manohy ny fahombiazany ihany koa ny Som Boeny. Mbola nivoaka ho mpandresy indray mantsy ry zareo, rehefa nanilika ny FC Prescoi Vakinankaratra, tamin’ny alalan’ny fandakana ny “tirs au but”, 4 no ho 3. Nisaraka ady sahala, 1 sy 1, ny roa tonta nandritra ny 90 mn nilalaovana.Ankoatra izay, resin’ny Mifa Analamanga, tamin’n y isa tery 1 no ho 0, ny AS Comato. Mbola tamin’io isa io ihany koa ny nanilihan’ny Askam Itasy ny Ascuf Matsiatra Ambony. Hitohy, rahampitso talata, ny andro fahadimy. Torcelin L’article Kitra vehivavy: mitarika hatrany ny AC Sab-Nam a été récupéré chez Newsmada.
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 12 janvier 2021 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologie du 12 janvier 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
EST: mitohy ny tohana ho an’ny fanatanjahantena
Manohy hatrany ny fitetezana iny faritra Atsimo Andrefan’ny Nosy iny ny filohan’ny fikambanana EST (Espoirs sportifs de Tuléar), i Vital Serge. Fanohanana ho an’ny fanatanjahantena sy ny sosialy ny tena imasoana, hitondrana fanampiana ho an’ireo klioba. Asa isan’ny nifampidinihana ny herinandto lasa teo ny fiaraha-miasa amin’ny Andrarangy ao Vangaindrano amin’ny fampitaovana sy ny fananganana kianja basikety any an-toerana. Teo ihany koa ny famatsiana fitaovana ny trano fikotranana Fivato. Ankoatra izay, tetikasa goavana hanatsarana ny lentan’ny atleta ao Toliara ny fanomezana fampiofanana ho an’ny mpanazatra sy ny mpitsara, mpitantana klioba sy ny maro.Mitohy hatrany, etsy ankilany, ny fitetezana ireo klioba rehetra ao Toliara sy ny fanomezana tosika ho azy ireo. Fanamby lehibe ihany koa, hoy hatrany ny fanazavana, ny hanome fiofanana ho an’ny mpanao fanatanjahantena mendrika ao Toliara ka hisy fanafarana manampahaizana iraisam-pirenena amin’izany, na alefa any ivelany mihitsy ireo atleta malagasy. Eo amin’ny lafiny sosialy kosa, nahafantarana ny fikambanana Espoirs sportifs ny fametrahana japy fakana rano madio fisotro ary mbola mitohy izany hetsika izany amin’izao. Misy ny fiaraha-miasa amin’ny fikambanana sy klioba hafa, toy ny Talio sy ny CosTM, amin’izao hetsika izao. Mi.Raz L’article EST: mitohy ny tohana ho an’ny fanatanjahantena a été récupéré chez Newsmada.